SERIE A: ACM VS INT 2-2…Perisic oo beeniyay guul Milan usoo carfaysay + Sawirro – Gool FM
SERIE A: ACM VS INT 2-2…Perisic oo beeniyay guul Milan usoo carfaysay + Sawirro
Raage November 20, 2016
(Milano) 20 Nof 2016 – Suso oo ahaa xiddiga garoonka ayaa laba ka dhaliyay kooxda Inter, iyadoo Antonio Candreva uu gool madfac ahaa ku barbarreeyay goolkii 1-aad, balse wuxuu ahaa Ivan Perisic ninka daqiiqaddii dhimashada qalbiga ka diley taageerayaasha Milan isagoo ciyaarta ka dhigay 2-2.
Kooxda Rossoneri ayaa ogayd in badis kaalinta 2-aad kali ku ahaan lahayd maaddaama Roma looga badiyay, guriga Atalanta, macallinka cusub ee Nerazzurri ee Stefano Pioli isna kulan bilowgiisii sameeynayay.
Milan oo uu ka maqnaa daafaceeda adag ee Alessio Romagnoli ayaa daqiiqaddii ugu dambaysay ilduuftay taasoo keentay inay fareheeda ka baxdo natiijo aad qaali u ahayd.
Milan oo ay dallad Chinese ihi la wareegayso Diseembar 13-keeda ayay tani Silvio Berlusconi uga dhignayd derby-giisii ugu dambeeyay, ugu yaraan isagoo milkiile ah, waxayna taageerayaasha Curva Sud sawirro waawayn oo farshaxan ah ku muujiyeen koobabkii uu qaaday 30-kii sano ee uu kooxda maamulayay.
AC Milan iyo Roma ayaa haatan kaalinta 2-aad uga jira horyaalka Talyaaniga.
SOOMAALIYA: Kooxda difaacaneysa horyaalka ee Banaadir oo kullan adag ciyaareysa